Choetech T520: xeedho wireless oo tayo leh | Androidsis
Mar kasta waxaa jira mobiillo badan oo suuqa yaal oo noo oggolaanaya inaan isticmaalno lacag-bixinta wireless-ka ah. Nooca noocan ahi wuxuu noo ogolaanayaa marar badan inaanu ka qaadno aaladda hal arrin hab fudud, oo aan lahayn fiilooyin iyo xaalado badan oo dhakhso leh. Marka shaki la'aan waa ikhtiyaar wanaagsan in la tixgeliyo munaasabado badan. Laakiin, si looga faa’iideysto ku-dallaca wireless-ka waxaan u baahan nahay xeedho dhererkeedu sarreeyo. Sida tan Choetech T520.
Haddii ay tahay inaan qeexno Choetech T520 waxaan u sameyn karnaa sida a xeedho tayo sare leh, oo leh naqshad wanaagsan iyo taas waxay u taagan tahay qiimaheeda hoose. Marka waxay u hoggaansameysaa wax kasta oo dadka isticmaala ay rabaan. Maxaan ka filan karnaa xeedhokan?
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan idin soo bandhigno adiga qeexida xeedho. Si aad fikrad uga hesho waxa aan ka filan karno. Marka lagu daro aragtida haddii ay ku habboon tahay qalabkeenna iyo in kale.
1 Choetech T520 Sooc
2 Liiska mobilada iswaafajiya
3 Dib u eegista Choetech T520
Choetech T520 Sooc
Peso: 349 garaam
Cabbirada: 16 x 11 x 8 cm
Saldhig leh afar cagood oo caag ah taasi waxay siisaa xasilooni
Kala xisaabtan Teknolojiyada QC 2.0 kaas oo bixiya wax soo saar illaa 10W ah oo loogu talagalay qaabka lacag-bixinta degdegga ah.
Ilaalinta heerkulka (culeys saa'id ah ama tamar lumin)
Xaaladda lacag-bixinta degdegga ah 1,4 jeer ka dhakhso badan ka badan heerka
La jaan qaada qalabka leh QI.
Liiska mobilada iswaafajiya
Liiska qalabka la jaan qaadaya Choetech T520 waa mid aad u ballaaran. Waxay suurtogal tahay inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu habboon ee ku shaqeeya xarkaha wireless-ka maanta. Waxaan ka helnaa noocyo ka mid ah noocyada sida Samsung ama Apple liiskaan. Intaas waxaa sii dheer, cqalab aad u tiro badan ayaa leh tiknoolajiyadda QI, sidaa darteed liistadu si joogto ah ayey u sii fideysaa.
Kuwani waa qaar ka mid ah moodooyinka la taageeray:
Samsung Galaxy S6 / S6 Edge / S6 Xusuusin
Galaxy S8 / S8 Plus, Xusuusin 8, Xusuusin 5+, S7 iyo S7 Edge
Kuwani waa qaar ka mid ah taleefannada gacanta ee iswaafajiya. Laakiin, dhammaan aaladahaas teknolojiyadda QI waxay ku habboon yihiin tan Choetech T520. In kastoo, ay muhiim tahay in sidaas la dhaho telefoonnada oo dhami ma taageeraan lacag-bixinta degdegga ah. Habkaas ayaa loo qoondeeyay in yar, guud ahaan dhammaadkii ugu dambeeyay ee ugu dambeeyay ee suuqa lagu dhufto.
Dib u eegista Choetech T520
Saaxiibkeen Francisco Ruiz wuxuu dhawaan sameeyay dib u eegis ku saabsan xeedho-sidahan, oo aad ka arki karto fiidiyaha hoose. Dhexdeeda waxaad ka heli kartaa fikrad aad u cad oo ku saabsan dhammaan sifooyinka tan Choetech T520, kuwaas oo badan.
Marka hore, naqshadeynta xeedho lafteeda ayaa soo jiidaneysa dareenka. Shirkaddu waxay dooratay naqshad L-qaabeeya, taas oo shaki la'aan ku siineysa muuqaal casri ah, muuqaal yar oo ka dhigaya mid raaxo leh. Tan iyo inta lacag bixinta waxaan si fudud u arki karnaa shaashadda qalabka haddii aan helno ogeysiisyo. Marka waa xeedho ku habboon in miiska la saaro intaan shaqeyneyno.
Dhinac kale oo aan ku qasbanahay istaag waa amaanka. Maaddaama ay suurta gal tahay in taleefanku kululaado markii la amrayo, laakiin xeedho-sameeyahan ayaa leh habka xakamaynta heerkulka. Markaa waa la damaanad qaadayaa marwalba in heer kulku aanu sare u kicin. Sidaas ka hortagga telefoonka ka kulaylka iyo keenaya waxyeelo u. Maxaa intaa ka badan, mar haddii 100% batari la gaaro, Choetech T520 wuxuu joojiyaa lacag-bixinta, ka hortagga taleefanka kuleylka ama culeyska xad dhaafka ah.
Sidoo kale, tan Choetech T520 waxay leedahay LED aad u khafiif ah oo buluug ah xagga hoose. Laydhkani wuxuu u adeegi doonaa tilmaan ahaan si loo ogaado haddii qalabku ku shaqeynayo. Waxay leedahay laba midab, buluug iyo cagaar. Marka si fudud oo muuqaal ah ayaan ku ogaan karnaa waqti kasta. Intaas waxaa sii dheer, ma sameynayo buuq ama gariir, LED-kiisuna aad ayuu u khafiifsan yahay oo ma carqaladeeyo. Marka taas waa la isticmaali karaa intaan seexanayno dhib la’aan.
Mid ka mid ah faa'iidooyinkeeda waa weyn tahay waxay ku dallacdaa 1,4 jeer ka dheereeya kuwa kale ee fiilooyinka xarkaha leh iyadoo ay ugu wacan tahay qaabkeeda degdegga ah. Xaqiiqdii, waad ka qaadi kartaa qalabka gudaha ilaa 18 daqiiqo qaabkan. Marka waa ikhtiyaar ku habboon waqtiyadaas markaan ku degdegayno inaan ka qaadno batteriga qalabka. In kasta oo, qaabkani u gaar yahay aalado yar oo iswaafajiya. Sidii aan hore u sharaxnay.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan xeedho ayaa ah inay leedahay qiimo aad u jaban oo loogu talagalay wax soo saarka noocaan ah. Waxaad ku heli kartaa Choetech T520 ka yar 20 euro adigoo gujinaya isla xiriiriyahan. Si fiican baad u akhrisay, qiimaheeda hada wuxuu ka hooseeyaa 20 euro. Marka tani waa fursad wanaagsan haddii aad raadineysay xeedho wireless oo tayo leh oo aan qaali ahayn. Maaddaama tani ay buuxineyso dhammaan shuruudaha.
Haddii aad xiiseyneyso inaad soo iibsato xeedho Choetech ah, waxaad si toos ah ugu samayn kartaa hoosta. Ha u ogolaan inay baxsato!
Halkan ka iibso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Choetech T520: Xeedho wireless tayo leh oo ka yar 20 euro
Soodejiso arjiga rasmiga ah ee Beesha Androidsis hadda